BVE 2016 တွင် Riedel ထုတ်ကုန်များ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » BVE 2016 မှာ Riedel ထုတ်ကုန်များ
BVE 2016 မှာ Riedel ထုတ်ကုန်များ
BVE 2016 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
ဖေဖော်ဝါရီလ 23-25, လန်ဒန်
Micron မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်၏ Riedel ရဲ့ MediorNet လိုင်းတစ်ခု 80G မီဒီယာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုကိရိယာဖြစ်သည်။ Micron ဆစ်ဂနယ်များအပါအဝင်အချက်ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေဖြင့်အပြည့်အဝကိုဗီဒီယို Router ကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမှ, မီဒီယာအခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ပေးပါသည်! Micron မျိုးစုံယူနစ်မလိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဗဟိုကဗီဒီယိုသည် router အဖြစ်ပေါင်းစည်းခံရဖို့ခွင့်ပြု, အပြည့်အဝအရွယ်မှာ HD-SDI အချက်ပြမှုများ။ တစ်ဦးကကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးအသုံးပြုသူများကိုရိုးရှင်းစွာကွန်ယက်မှ Micron node များထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အချက်ပြစွမ်းရည်နှင့်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်တည်နေရာနှစ်ဦးစလုံးချဲ့ထွင်ဖို့ခွင့်ပြုစနစ်ဒီဇိုင်းအတွက်မွေးရာပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ အဆိုပါ MediorNet MetroN core ကိုဖိုင်ဘာ router ကိုအတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်, Micron 24 SD ကအပါအဝင်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်အချက်အလက်သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များတစ်ဦးပြည့်စုံခင်းကျင်း features /HD/ 3G-SDI ငါ / Os နှစ်ခု MADI optical ဒီဂျစ်တယ်အသံဆိပ်ကမ်းများ, တစ်ဦး Gigabit Ethernet port နှစ်ခုထပ်တူပြုခြင်းကိုကိုးကားငါ / Os နှင့်ရှစ် 10Gb MediorNet မြန်နှုန်းမြင့်လင့်များ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-MicroN.zip
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: MediorNet Micron
RAVENNA / AES200 နှင့် AVB ပံ့ပိုးတန်ဂို TNG-67 အပြည့်အဝ networks ပလက်ဖောင်း
အဆိုပါတန်ဂို TNG-200 RAVENNA / AES67 နှင့် AVB စံချိန်စံညွှန်းများထောက်ပံ့ Riedel ရဲ့ပထမဆုံး network-based ပလက်ဖောင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ကပ်အပ်နှံအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး application ကိုနှင့်တကွ, ပလက်ဖောင်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဖြေရှင်းချက်သို့လှည့်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါယူနစ်သူ့ဟာသူခပ်သိမ်းသောကာလစုံလင်သောဖတ်နိုင်တဲ့သေချာတဲ့ high-resolution full-အရောင် TFT display ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အလိုလို Front-panel ကိုထိန်းချုပ်မှုရလာဒ်ကဒိနှင့်အသံအဆင့်ဆင့်၏ညှိနှိုင်းမှု၏ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရိုးရှင်း။ အစွမ်းထက်အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူတန်ဂို TNG-200 နှစ်ခုပေါင်းစပ် Riedel ဒစ်ဂျစ်တယ် partylines နှစ်ခု RAVENNA / AES67- နှင့် AVB-သဟဇာတဆိပ်ကမ်းများ, နှစ် Ethernet port များ, တဦးတည်း option ကို slot ကများနှင့်မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အဆိုပါဆက်ကပ်အပ်နှံအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး application ကို, "ကျွန်မရဲ့ပထမဦးစွာ Riedel" အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျကွောငျးတခုအကျိုးရှိစွာအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်အစတန်ဂိုပလက်ဖောင်းပြန်သွားလေ၏။ အဆိုပါအချိုးမညီ 40 x ကို 80 matrix ကိုအရွယ်အစားပြားမှစံပရီမီယံအရည်အသွေးစတီရီယိုအသံဆက်သွယ်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုနောက်ထပ် Riedel ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံများဖို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-Tango.zip
ဓါတ်ပုံများ၏ဖော်ပြချက်: တန်ဂို TNG-200
အသစ် RSP-2318 Smartpanel အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကြွယ်ဝစေခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် AV စနစ်ပညာရှင်များဆက်သွယ်ဖို့လမ်းကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဟု features တွေနဲ့စွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။ အစွမ်းထက်ဘက်စုံသုံး user interface ကိုအဖြစ်အစေခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး control panel ထဲက, ဒီ Riedel device ကိုသုံး high-resolution, နေရောင်ခြည်-ဖတ်လို့ရအောင်, multitouch အရောင်ပြသမှုပါဝင်သောထူးခြားတဲ့ feature ကို set ကိုဝါကြွားတတ်; ပရီမီယံအရည်အသွေးစတီရီယိုအသံ; တစ်ဘာသာမျိုးစုံတဲ့ character set; ရုံ 18 ru အတွက် 1 သော့။ ဤအင်္ဂါရပ် Riedel ရဲ့အသစ် Smartpanel နောက်ထပ် app များကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ချဲ့ထွင်နိုင်မယ့်အားကောင်းတဲ့ user interface ကိုလုပ်ရမည်။ အဆိုပါ RSP-2318 များအတွက် Riedel ရဲ့ပထမဦးဆုံး app ကိုတစ်ခုဆန်းသစ်နှင့်စမတ်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး panel ကိုစ Smartpanel ပြန်သွားလေ၏။ AES67 နှင့် AVB ဆက်သွယ်မှု / CAT ကျော် AES3 အတူစံများမှာဟများထံသွားရောက်ကာ optional ကို။ အပိုဆောင်း features တွေ Mono သို့မဟုတ်စတီရီယို applications များလဲလှယ်နားကြပ် connectors တစ်ခုဘက်ပေါင်းစုံ power supply, တစ်ဦးချင်းစီသော့တစ်ဦးချင်းစီအသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုက USB port နှစ်ခု Ethernet connectors, GPIO, အသံ I / O တစ်ခု option ကို slot ကတစ်ဖြုတ် gooseneck မိုက်ကရိုဖုန်း, SD ပါဝင်သည် ကဒ် slot ပါနှင့် HDMI output ကို။
Real-time ကွန်ရက်များ၏ MediorNet မိသားစု 2-ru အကြီးစား MediorNet MetroN core ကို router ကို၏ထို့အပြင်နှင့်အတူတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းအချက်ပြမှ Riedel ရဲ့ကောင်းချီးကွန်ယက်ချဉ်းကပ်မှုဖွင့်၌, သစ်ကို MediorNet MetroN 64x10G ဆိပ်ကမ်းများတစ်ဦးကို real-time routing ကိုစွမ်းရည်မြှင့်ပေးထားပါသည်။ BVE 2016 စဉ်အတွင်း Riedel သည်ဤစွမ်းရည်နှင့်အတူသစ်ကိုဘောင်ဖိုင်ဘာကနေတစ်ဆင့်အခြားအ MediorNet ဘောင်နှင့်အတူ interfacing, ပိုကြီးတဲ့ MediorNet တပ်ဆင်ခအတွင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိုငျပုံကိုသရုပ်ပြရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Riedel/Riedel-MetroNCoreRouter.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: MediorNet MetroN Core Router
"BVE 2016 မှာကျနော်တို့မစ်ရှင်-အရေးပါသောမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု applications များပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုဆောင်ခဲ့မည်အကြောင်းဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုခင်းကျင်း feature ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်သရုပ်ပြ watch, ဤထုတ်ကုန်၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်ခြားနားချက်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကြိုဆိုပါတယ်။ "
-- ပေါလုကို Rivens, အထွေထွေမန်နေဂျာဗြိတိန်, Riedel ဆက်သွယ်ရေး
Riedel ဆက်သွယ်ရေး ဒီဇိုင်းများ, ထုတ်လုပ်နှင့်ထုတ်လွှင့်, လိုလားသူအသံ, အဖြစ်အပျက်, အားကစား, ပြဇာတ်ရုံ, လုံခြုံရေး application များအတွက်ရှေ့ဆောင် Real-time ဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များဖြန့်ဝေ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းဖြစ်ရပ်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ, ဖိုင်ဘာ Backbones ရဲ့နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်အရွယ်အစားဖြစ်ရပ်များအတွက်အလွယ်တကူစကေးကြောင်းကြိုးမဲ့ signal ကိုထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုရေဒီယိုနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များများအတွက်ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ 1987 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီယခုဥရောပ, အာရှ, သြစတြေးလျနှင့်အမေရိကအတွက် 350 နေရာများမှာ 13 ကလူထက်ပိုပြီးလုပ်ကိုင်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ BVE 2016 MediorNet Micron Riedel ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-25
ယခင်: ဟင်းလျာများ HD ကိုအာရှသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' HEVC Compression ကိုအဖြေရှာခြင်းအားဖြင့် Powered ပထမ Worldwide မှအားလုံး-HEVC DTH ဝန်ဆောင်မှု, လွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: Frixxer နှင့် Youtoo အမေရိကတိုက် Juke Superbowl ကြော်ငြာ